XOG: Wasiirka Warfaafinta Puntland oo isku dayay in uu Marin habaabiyo Bahda Warbaahinta Puntland. |
XOG: Wasiirka Warfaafinta Puntland oo isku dayay in uu Marin habaabiyo Bahda Warbaahinta Puntland.
Wasiirka Warfaafinta Puntland Cabdiweli Indha-guran ayaa isku dayay inuu Marin habaabiyo Suxufiyiinta Puntland kaddib markii uu in badan ka bedaly Xeerka Warbaahinta oo horay ay u ansixiyeen Golahii Wasiiradii Hore ee Dowladdii C/raxmaan faroole.
Maalinimadii Tallaadada ayaa saxafadda ka howlgasha Magaalada Garoowe ogadeen in Wasaaradda Warfaafintu ay u gudbisay Barlamaanka si loo ansixiyo Xeer aan ahayn Xeerkii ay ku wada heshiyeen Dowladda, Bulshada Rayidka iyo Suxufiyiinta Puntland.
laga bilaabo Qodobka Seddaxaad ilaa Qodobka 25-aad ayaa ah kuwa wax badan laga bedelay marka loo eego Xeerkii lagu heshiiyay oo Nuqaldiisiina la hayo.
Xeerkan Cusub ee loo qaybiyay Xubnaha Barlamaanka Puntland Axaddana la filayo in laga doodo ayaa ah mid aan waafaqsanayn heshiiskii lagu wada heshiiyay.
Wasiirka Warfafinta Puntland ayaa u muuqda mid qol hoosta kaga soo xirtay Xeerkan kaddibna kala guray, waxaana Xasuusin mudan in Wasiirka uu kamid ahaa Golahii Wasiirada ee ansixiyay xeerkan Sannadkii hore.
Qaar kamid ah Indheer Garadka Saxafiyiinta Puntland ayaa ka hortagay Marin habaabinta Warfaafintu ay ku doonaysay inay ku ansixiso Xeerka Saxafadda Puntland oo wakhti badan iyo Kharashaadba ay ku bixiyeen Beesha Caalamku, isla markaana dad aqoon sare u leh Shuruucda Warbaahinta in badana ku soo jiray ay ka soo shaqeyeen.
Saxafiyiinta ayaa dadaal badan ku bixyay Tallaadadi iyo Arbacada maanta ah sidii ay u gaarsiin lahayeen meelaha ay qusayso islaarkaana ay u ogaysiin lahayeen in Xeerkan dib loo celiyo sidii uu ahaa ee hore loogu heshiiyey.
Ururka Suxufiyiinta Puntland ee MAP ayaa in badan dadaal xoggan u galay sidii Xeerkan uu u noqon lahaa mid ka Tarjuma Daruufaha iyo Marxaladda Suxufiyiinta Puntland.
Suxufiyiinta Puntland ayaa aad ugu hanweyna in Xukumadda Cabdiweli Gaas in badan tixgelin doonto Xoriyadda saxafadda Madaxabanaan.